Inona no atao hoe Search Engine Spam? | Martech Zone
Nandeha daka be izahay tato ho ato ary nampitandrina anao momba ny teknikan'ny motera fikarohana izay hahatonga anao hanana olana. Na dia tsy mijaly aza ny tranokalanao anio, Google manohy manitsy ireo algorithma nataony ary mizaha toetra vaovao hahatratra anao rahampitso. Aza alaim-panahy hanao spam ny motera fikarohana… hahatratra anao izany.
izany Search Infographic by SEO Book mitety anao amin'ireo teknika samihafa tsy maintsy sorohinao mba tsy hamoronana atiny izay heverina ho spam motera fikarohana ianao.
Tags: Sary torohayfikarohana Optimizationinfografika fanatsarana motera fikarohanamotera fikarohanafikarohana infographicspam fikarohanaseo infographicseobook
Aug 15, 2012 amin'ny 11: 44 AM
Ao amin'ny fampidiran-dresakao dia milaza ianao fa ilay infographic dia “mitaingina anao amin'ireo teknika samihafa tokony hialanao mba
tsy mamorona atiny izay heverina ho spam motera fikarohana ianao. ”
Saingy ny fijerena akaiky ny sary dia toa mampiseho fikasana hafa: ny sary dia toa natao hanesoana na hitsikera ny hevitra iray manontolo amin'ny Search Engine Spam - na farafaharatsiny mba hanesoana ny famaritan'i Google azy.
Nasongadin'izy ireo, tao amin'ny tsanganana ankavanana, fa ny teknikan'i Google heveriny ho "ratsy" no ampiharin'i Google, ary manome sosokevitra izy ireo fa ireo teknika ireo tokoa no namela an'i Google ho lasa tena nahomby. Indrindra ny faran'ny sary (“Ah… ka ny spam dia…”) dia toa maneso ny foto-kevitry ny “spam an'ny motera fikarohana” sy / na milaza fa ny motera fikarohana dia teknika ara-barotra mahomby sy mahomby.
Inona ny hevitrao momba izany? Mahita hafatra mitovy amin'ilay hitako ve ianao?
Ary raha izany…. ekenao ve izany hafatra izany?
15 Aogositra 2012 amin'ny 12:39 PM
Tena hitako ny zavatra hitanao, Greg. Somary miahiahy ny amin'ny fomba fiasan'i Google momba ireo zavatra ireo ihany koa aho - saingy izy ireo no sefo ary tsy maintsy manaraka ny takin'izy ireo izahay ... na dia mifanaraka am-paosiny aza izany.